पुण्य गौतम अब हिरो बन्दै,यस्तो रमाइलो गरे शुटिङमा हसाउनु हसाए (भिडियो सहित ) – Namaste Host
February 28, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on पुण्य गौतम अब हिरो बन्दै,यस्तो रमाइलो गरे शुटिङमा हसाउनु हसाए (भिडियो सहित )
पुण्य गौतम अब हिरो बन्दै,यस्तो रमाइलो गरे शुटिङमा हसाउनु हसाए,सधै मिडियामा छाइरहने चिर परिचित नाम हो पुण्य गौतम । हरेक बिषयमा बोल्न प्रखर पनि छन उनि। मिडियाले खोज्ने बयक्ती हुन पुण्य गौतम । समाजिक अभियन्ता समेत रहेका पुण्य प्राय बि,बादमा पनि आइरहन्छन जानी नजानी प्राय जसो, उनि भर्खर मात्र खाना खाने होटलको बारेमा चर्चामा थिए । यिनै पुण्य गौतम अब शर्ट मुभीमा मुख्य पात्रको रुपमा आउँदै छन ।
सम,सामायिक घट,नामा आधारित हुने शर्ट मुभीमा पुण्य आफ्नो रियल पात्रमा अभिनय गर्दै छन । उक्त शर्ट मुभीको नाम पनि पुण्य गौतम नै रहेको छ, निर्देशकले भने मुभीमा उनको बोल्ने थेगो सबै प्रयोग हुनेछ उनले भने यो हाम्रो टिम वर्क हो यदी यो शर्ट मुभी सफल भएमा हामी हरेक प्रोजेक्टमा पुण्य गौतमलाई अनुब,न्धित गर्छौ । भिडियो हेर्नुहोस
याे पनि पढ्नुहाेस्।
काठमाडौं । नेपाली फिल्म क्षेत्र गसिपका एउटा राम्रो वजार हो । कला क्षेत्रमा रहेकाहरुका बारेमा विभिन्न किसिमका ग सिप बन्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी हुने भनेको कलाकारको प्रेम र सम्बन्धका बारेमा हो । कलाकारको ब्यक्तिगत जिवनका बारेमा सर्वसाधारणलाई धेरै चासो हुन्छ । त्यसैले पनि यस्तो गसिप धेरै चर्चीत हुन्छन् । अनेक अ ड्क लवाजी गरिएका गसिप चल्ने गरेका छन् ।
हप्तै पिच्छे आउने यस्तो गसिप कति सत्य हुन्छ त कति हल्ला मात्र हुन्छ । नायीका निता ढुंगानाको प्रेमको फेरी चर्चा हुन थालेको छ । अहिले उनको प्रेमको चर्चा चर्चीत ज्यातीष हरिहर अधिकारीका साथमा रहेको छ । हरिरह नायक पनि हुन् ।
नायीका नीता यतिबेला भारतमा छन् । उनी एउटा फिल्मका लागि भारत गएको बताइएको छ । तर यता एकाएक केही दिन यता ज्योतिष हरिहर अधिकारी पनि हराएका छन् । हराएका हरिहरले एक दिन सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर पोष्ट गरे त्यसमा उनले जुन चश्मा लगाएका छन् त्यही चश्मा लगाएको अर्को तस्बिर नीता ढुंगानाले पनि पोष्ट गरिन् । यहि तस्बिरको आधारमा अहिले उनीहरु संगै रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
साथै चैतमा जन्मदिन रहेका हरिहरलाई नीताले भ्यालेन्टाइन डे को दिन दुई जनाको तस्बिर राखेर जन्मदिनको शुभकामना दिएकी छन् । उनले हेपी भ्यालेन्टाइन भन्न नसकेर हेपी वर्थ डे भनेको हुनसक्ने अनुमान पनि लगाइएको छ ।
टिकटकमा भाइरल बन्न लगाइन् आफ्नै घाँटीमा पासो, झुक्किएर स्टुल खस्दा गयो ज्या;न
बैंक खाताबाट हरायो ४ लाख! हाेसियार तपाईंको पनि पैसा हराउन सक्छक
फेरि एका एक चर्चामा रश्मी देसाईका तस्बिर, के भन्छन् त फ्यान ?
बर्षा शिवाकोटीले धो,का दिए पछी सबिनले यस्तो गरे,वर्षा भन्छिन् “ऊ कस्तो हो भन्ने सबै प्रमाण दिइसक्यो” (भिडियो सहित)